DeLonghi Magnifica ESAM 4000.B Bean to cup Coffee Machine ( black )
> Electronics>Coffee Maker>DeLonghi Magnifica ESAM 4000.B Bean to cup Coffee Machine ( black )
Reference ESAM 4000.B
အလွယ်တကူ Cappuccino ပြုလုပ်နိုင်သော စနစ်ပါဝင်ခြင်း
Dimension-238 x 430 x 351 (cm)
Bean-to-cup machine with the possibility to customise your coffee as you prefer. Equipped withamanual cappuccino device to prepare easilyagreat cappuccino or hot milk and cup holder. It is made in Italy. Besides2year service warranty is provided.
ကော်ဖီနှစ်သက်သူတို့၏ ဘ၀ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် De'Longhi မှ ထုတ်လုပ်သောကော်ဖီစက်များကို ရွေးချယ် အသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါသည်။ De'Longhi ၏ ESAM 4000.B ကော်ဖီစက်သည် အရည်အသွေး မြင့်မားသော ရောင်စုံမျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကော်ဖီကို လွယ်ကူစွာရွေးချယ်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ခွက်များကို အပူပေးနိုင်သလို ရေနွေးပူလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ကော်ဖီအမှုန့်စစ်ဇကာကို အလွယ်တကူဖြတ်ပြီး သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာကာ လူမပင်ပန်းဘဲ နေ့စဉ်ဘ၀ကို အကောင်းဆုံး ကော်ဖီများ သောက်သုံးရင်း ပိုမို စိတ်ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
အီတလီနိုင်ငံထုတ်စက်ဖြစ်ပါသည်။ *၀န်ဆောင်မှု (၂)နှစ် အာမခံပေးထားပါသည်။